Xirfadaha CHPW - Caymiska Caafimaadka Deegaanka Gobolka Washington - CHPW
Diyaar ma u tahay inaad isbedel sameyso?
Ku soo biir Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) himiladeenna si aan daryeel caafimaad oo wanaagsan ugu soo qaadno qoysaska Washington.
Eeg Meelaha Furan
Hadaan nahay CHPW, waxaan bulshada u dhaqan galineynaa maalin walba. Si taas loo sameeyo, waxaan ku tiirsan nahay koox ka dhigeysa xubnaheena koowaad: dhageysiga iyaga, u doodista iyaga, iyo ka sii gudbida iyo ka sii weyn si looga caawiyo inay la kulmaan baahiyahooda caafimaad.
EEG SHAQO FURAN
Waxaa laga yaabaa inaan kuu hayno shaqadii kuugu fiicnayd. Baadh jagooyinka furan ee CHPW.
KA EEG JOOGTADA
MAXAY NOOGU SHAQAYNAYAAN?
CHPW waxay leedahay rikoor raad ah oo ku saabsan isbedelka nolosha dadka. Akhriso qiimaheena oo ka maqal shaqaalaha hada jira.
FAA'IIDADA AY LEEDAHAY
Shaqaalaheenu waxay taageeraan xubnaheena, sidaa darteed waxaan ka taageernaa hogaaminta nolol isku dheelitiran, oo qancisa.
Maxay shaqaalaha CHPW leeyihiin?
Himilada CHPW suurtogal ma noqonayso hadaanay jirin shaqaale u heellan, naxariis leh, iyo hal abuur leh. Ka maqal xubnaha kooxdayada sababta ay u doorteen CHPW iyo sida ay u tahay inay halkan ka shaqeeyaan.
Shaqaalaha Hada Jira
Ma tahay shaqaale CHPW? Ha iloobin inaad ka hubiso boggayaga shirkadda, InsideCHPW, si aad u hesho warar muhiim ah, shirarka soo socda ee shirkadda ballaaran, iyo kudos. Tani waa meeshaada si aad u ogaato waxa ka socda CHPW.
AAD Gudaha INCHCHW
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Julaay 9, 2020